लाभदायक के हो? लेक्सिकनमा परिभाषा
सुरु ऋण wiki सहभागी बन्धन
एक सहभागी सम्बन्ध के हो?
तिनीहरूको शब्द छ सहभागी बन्धन निश्चित रूपमा एक पटक सुने र तपाइँ यसको बारेमा थप जान्न चाहानुहुन्छ। तपाईं यस शब्दको लागि विस्तृत व्याख्या कसरी जान्नुहुन्छ र यसरी तपाईंको ज्ञानमा सुधार गर्दछ? यहाँ, कानूनी परिभाषा, यो शब्द ब्यान्ड बाण्ड को रूप मा छ, जो लाभकारी भागीदारी को हकदार हो। यो सम्भवतः तपाईलाई अधिक भ्रमित गर्नेछ, किनकि तपाईलाई थाहा छ यो शब्दले व्यापारिक रुचिहरु को साझा ब्याज दर र एक अतिरिक्त ब्याज दर संग वर्णन गर्दछ। यो अतिरिक्त रुचि पनि लाभ विकल्प संग प्रदान गरिएको छ। लाभ बन्धनको अवधारणामा नजिकको हेर्नुहोस्। शब्दको पहिलो भागमा शब्द लाभ र दोस्रो भागको ऋण समावेश छ। यहाँ तपाईंले पहिले नै देख्न सक्नुहुनेछ कि कम्पनीले वास्तवमा यसको व्यापार सफलता र नतीजाको साझेदारीमा समस्या राख्दछ। तर तपाईका लागि, शब्दको व्याख्या स्पष्ट रुपमा बुझ्न सकिन्छ।
सुरक्षाको रूपमा लाभ ऋण सुरक्षा
आय बन्धन स्टक निगम ऐन को जारी लागि कानुनी आधार § 221 मा नियमन छन्। यो सुरक्षा निश्चित ब्याज दर, गुण, कि वास्तविक निश्चित दर एक लाभ रूपमा प्रतिज्ञा छ, र मुनाफा को दोस्रो भाग चल आकारको चासो देखि गठन गरिएको छ हुन छ। फाइनान्सको अन्तिम प्रतिज्ञा ब्याज कम्पनीको कुल मुनाफामा आधारित छ। यसको अतिरिक्त, यी चर दरहरू सामान्यतया लाभांश स्टक निगमसँग युग्मित र यहाँ लाभांशको एक निश्चित रकम प्राप्त गर्नु पर्छ। यो धेरै जटिल छ, तर व्यवहारमा एक लगानीकर्ताको लागि धेरै आकर्षक। एक सुरक्षाको रूपमा, सहभागी बन्धन प्रतिबन्धित वर्गको सहभागी अधिकारमा वर्गीकृत गरिएको छ।
अब तपाईंसँग एक परिभाषा छ जुन तपाईंलाई कुन प्रकारको सुरक्षा भनेको हो भनेर देखाउँछ। सब्सक्राइब गरिएको डिबेंचरहरू स्टक निगम द्वारा आयोजित गरिन्छ ऋणबाट र आय बांडहरू मालिकहरूको लागि सार्थक हुन सक्छ। यी दुइटा सन्देशहरू जुन तपाइँले देखाउँछन् कि तपाईं यहाँ एक सहभागी ब्यान्डको साथ लगानी गर्न सक्नुहुन्छ जुन दुई अर्ब रुचाइन्छ र यसैले धेरै लाभकारी-आधारित हुन्छ।
लाभ बांडहरू पनि बोन्डको रूपमा मानिन्छ
स्टक उन्मुख कम्पनीहरू पूंजी प्राप्त गर्न लाभ-लिङ्क बांड प्रयोग गर्छन्। लाभ सम्बन्धी सम्बन्धलाई पनि अभिभावक ऋण भनिन्छ, किनकि यी बांडहरू प्रतिबन्धित हुनुपर्छ र, माथि उल्लिखित, सुखद अधिकारहरू छन्। लगानीकर्ता कम्पनीको मुनाफामा भाग लिन्छ। विशेष गरी व्यवसाय सुरुवात र सुरुवात कम्पनीहरू, पूंजीको खरीद गर्न लाभ बांडको मुद्दा प्रयोग गर्नुहोस् र यसैले आफ्नै व्यवसाय विचार अगाडि बढाउन। यदि, उदाहरणका लागि, तपाईं एक कम्पनीको शेयरधारक बन्नुभयो जसले लगानीकर्ताहरूलाई बांडको सामना गर्दछ, तपाइँ एक सदस्यता दावीको अधिकार पाउनुहुनेछ। तथापि, मुनाफा बन्धन तेस्रो पक्षहरूमा पारित नहुन सक्छ, किनकि यो सहभागिता जर्मन स्टक कार्पोरेशन अधिनियममा बाहिर निस्किएको हुनुपर्छ। परिणाम एक ठोस र व्यक्तिगत दाबी छ, जो केवल लाभ मा स्थानांतरित गर्न सकिन्छ, - ब्यान्डहोल्डर। एक लाभ-लिने बांडको साथ तपाईंले कम्पनीको वास्तविक व्यवसायमा भाग लिनुहुन्छ। लाभ बांड जर्मनीमा केही मात्रामा मागमा छन् र तिनीहरू इक्विटीको संसारमा एक साधारण अभ्यास होइनन्। कम्पनीको प्रतिभूतिमा वास्तविक सहभागिता कम मांगमा छ। यद्यपि, यो पनि अर्थ हो कि लाभ-असर बंधकहरू हानिमा संलग्न छन्। यदि कम्पनीले लाभ बन्छ र हानि क्षेत्रमा पुग्छ भने, ब्याज दर नकारात्मक हुनेछ। नतिजाको रूपमा, राजधानीको हानि धम्की दिइन्छ र लाभ बन्धन को जोखिम यहाँ हेर्न सकिन्छ। मुनाफा सम्बन्धी सम्बन्धको सम्बन्धमा, सहभागिता बांडहरु लाई पनि ब्याज बांड र ब्याज दर को रूप मा संदर्भित गरिन्छ आय आय को लाभ को बंधन संग सहमत हो। यसको मतलब, सरल व्याख्याको रूपमा, हो कि बियर बांड कम्पनीमा शेयर होल्डिंगमा लिङ्क गरिएको छ।
अघिल्लो लेखपत्र बंधक
अर्को लेखनगद क्रेडिट